▷ Aiza ireo serivera Fortnite
alatsinainy, martsa 8, 2021
Fortnite dia lalao efa henon'ny rehetra, na dia eo amin'ny vaovao aza, ny lalao dia nahavita naka ny sain'ny olona an-jatony erak'izao tontolo izao tao anatin'ny taona vitsivitsy.
Io fitomboana io dia namela Fortnite dia napetraka ho iray amin'ireo lalao lehibe amin'ny tantaran'ny ankehitriny Battle Royale. Izy io aza dia iray amin'ireo lalaovina indrindra, mihoatra lavitra ny mpifaninana aminy PUBG am-pony
Betsaka ny olona manontany tena ny amin'ny fomba mihazakazaka tsara ny lalao na eo aza ny zava-misy fa misy olona any amin'ny firenena rehetra eto an-tany, na saika ny rehetra, izay milalao mavitrika tsy misy olana.
Izany dia vokatry ny hamaroan'ny mpizara fortnite fa misy fananana manerana ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao.
Raha sanatria lohahevitra mahaliana anao io dia tonga amin'ny toerana mety ianao satria hiresaka bebe kokoa momba izany izahay. Hanolotra anao ireo toerana hahitanay izahay mpizara fortnite fananana.
Aiza ireo mpizara Fortnite?
Araka ny noteneninay, Fortnite manana mpizara no miparitaka eraky ny vazan'izao tontolo izao izay azon'ny olona dinihina.
Amerika Avaratra, Amerika Latina, Eropa, amin'ireo firenena hafa. Fa raha tena voafaritra kokoa dia avelanay anao ny lisitra manokana:
Sao Paulo, Brezila
Mety hahita mpizara maro kokoa isika amin'ny ho avy, na dia mbola hita ihany aza, fa ny fitomboan'ny Fortnite tsy hijanona amin'izao fotoana izao.
Fa maninona no Fortnite no ratsy amiko